Momba anay | Tianjin Yixin Pipe Equipment Co., Ltd.
Tianjin YIXINnatsangana tamin'ny taona 2010 indrindra nirotsaka tamin'ny R&D, famokarana sy fivarotana fitaovana fantsom-pahefana mandeha ho azy, ary manome programa fitarihana teknika fantsona hanampiana ny mpanjifa hamaha olana ara-teknika. Mifikitra amin'ny foto-kevitry ny "vokatra fanohanana ara-teknika matanjaka izahay, ny kalitao avo lenta manitatra ny tsena, ny serivisy tso-po hampiroborobo ny marika" dia miziriziry amin'ny fanentanana ny mpanjifa sy ny fitarihana amin'ny tsena, amin'ny alàlan'ny vokatra azo antoka sy mahomby, serivisy aorinan'ny varotra tompon'andraikitra, hanampy ireo orinasa mahomby.
Anaram-boninahitry ny orinasa siansa sy teknolojia
Mari-pahaizana ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Anaram-boninahitra amina orinasam-bola AAA
Manana zon'ny mpamorona 5 sy zon'ny patanty mihoatra ny 10 izahay
Staff efa za-draharaha
Fanekena ny kalitao
Didy kely ekena
Ny antoka ho an'ny vokatra rehetra: Warranty herintaona. Raha sendra misy tsy fahombiazana mandritra ny androm-piainan'ny vokatra dia hamaly ny fangatahan'ny mpanjifa ao anatin'ny 24 ora ny orinasa, hanome valiny ao anaty 2 ora ary hanao vahaolana ao anatin'ny 8 ora.
Fananganana komisiona sy fiofanana: aorian'ny fahatongavan'ilay fitaovana ho an'ny mpividy dia handamina teknisianina hikarakara ireo fitaovana eo an-toerana izahay mandritra ny fotoana nifanarahan'ny roa tonta sy ny fampiofanana ny olona mifandraika amin'izany. Ny fiofanana ho an'ireo mpandraharaha dia misy ny fotopoto-pitsipika fototra momba ny fampitaovana sy ny fikirakirana ireo lesoka iraisana, mba hahafahan'ny mpandraharaha mampiasa fitaovana, fikojakojana ary famahana olana tsy miankina.
Aorian'ny fe-potoana fiantohana dia afaka manolotra serivisy fikojakojana maharitra ny mpivarotra. Hanatanteraka avy hatrany ny serivisy izahay aorian'ny fanamafisan'ny mpividy ny tetik'asa fikojakojana sy ny vidiny. Ny mpividy dia handoa ny vidiny aorian'ny fanamafisana ny mari-pahaizana momba ny serivisy. Ny fenitry ny asa amin'ny serivisy fikojakojana sy ny vidin'ny kozatra dia tokony nifanarahan'ny roa tonta tamin'ny alàlan'ny fifanarahana asa maharitra.
Fanamarinana momba ny siansa sy ny teknolojia
Mari-pankasitrahana momba ny trosa AAA
Taratasy fanamarinana momba ny zon'ny mpamorona rindrambaiko
Fanamarihana momba ny trosa AAA
Utility modely patanty modely